Vanopa Vamwe Zvavanenge Vadhaunirodha
Kunyange zvazvo Indaneti isati yava kuwanikwa nevakawanda muCuba, vamwe vava kukwanisa kuibata munzvimbo dzakavhurwa neimwe kambani yemafoni. Zvisinei, izvi zvinodhura chaizvo. Saka kuti hama dzibatsirwe nejw.org, bazi rakakurudzira ungano kuti dzironge kuti muparidzi mumwe chete adhaunirodhe mabhuku, zvakarekodhwa, uye mavhidhiyo pajw.org obva apa zvimwe Zvapupu zvemuungano dzacho. Urongwa uhwu huri kufamba zvakanaka.
Vakakoshesa Imba yeUmambo Kupfuura Foni
Teona, ane makore 10, nemunin’ina wake Tamuna, ane makore 8, vanogara muRepublic of Georgia. Vasikana vacho vaida foni yeserura. Kuti vagone kuitenga, ambuya vavo vakavimbisa kuvapa mari mwedzi wega wega kubva papenjeni yavo. Zvinorwadza kuti ambuya vavo vakaerekana vafa. Kunyange zvakadaro, vemumhuri vakapa vasikana vacho mari yekupedzisira yepenjeni yaambuya vavo kuti vagone kutenga foni yavaida. Pashure pekufunga nezvazvo, vasikana vacho vakanyorera ungano yavo vachiti: “Tinoziva kuti panopera mavhiki maviri Imba yedu yeUmambo ichatanga kuvakwa mumusha wedu weT’erjola. Ambuya vedu vaida chaizvo kubatsira pabasa iri, saka tiri vaviri tasarudza kupa penjeni yese yekupedzisira yaAmbuya kuungano pane kuti titenge foni. Tapota tivakirei Imba yeUmambo yakanaka!”
Magwaro echiGiriki Mumutauro wechiTetum
Musi wa17 January 2014, muguta reDili, muTimor-Leste, Hama Geoffrey Jackson veDare Rinodzora vakabudisa Shanduro yeNyika Itsva yeMagwaro echiKristu echiGiriki mumutauro wechiTetum, uyo unotaurwa nevakawanda munyika macho. Munguva yapfuura, maBhaibheri eMagwaro echiGiriki mumutauro wechiTetum aiprindwa nekuparadzirwa nechechi yeRoma chete, uye yairamba kutengesera Zvapupu zvaJehovha nevamwe vaifungirwa kuti vari kudzidza Bhaibheri neZvapupu. Zvisinei, shanduro yakaitwa neRoma yaiva nezvakawanda zvisina kururama, zvakasiyirirwa, mashoko echinyakare, uye yaiva nezvimwe zvakakanganiswa pakuprinda. Kusiyana naizvozvo, mumwe mumishinari anonzi Darren ari kuTimor-Leste akataura nezveShanduro yeNyika Itsva achiti: “Vakawanda vekuTimor-Leste, pavanongoverenga Shanduro yeNyika Itsva vanofarira kururama kwayakaita vobva vakumbira kuti vavewo neyavo. Inovaitira nyore kuverenga uye vanofarirawo kuti ine mabhii akakura sezvo dzimba dzevakawanda dzisina chiedza chakanaka. Vazhinji vakawana shanduro iyi vava kudzidza Bhaibheri.”
Macedonia: Kuparidza vachishandisa mabhuku echiRomany
Muna January 2014, basa rekushandura mumutauro weRomany, uyo unotaurwa kuMacedonia, rakawedzera zvikuru. Boka revashanduri rakaumbwa uye sangano rakapa mvumo yekuti mabhuku azoramba achishandurwa mumutauro wacho, pachishandiswa manyorero atinoita uyewo manyorero echiCyrillic. Izvi zviri kubatsira chaizvo vanhu vanotaura chiRomany avo vakajairana nemanyorero echiCyrillic, icho chinonyanya kushandiswa kuMacedonia.
Vanhu vakawanda vanotaura chiRomany vanobayiwa mwoyo nekubudiswa kuri kuitwa mabhuku mumutauro wavo nesangano raJehovha. Imwe hanzvadzi yakati: “Semunhu anotaura chiRomany, kakawanda ndinoona kuti vanhu vemamwe marudzi vanonditarisira pasi, saka ndinoonga chaizvo kuti Jehovha anondikoshesa zvikuru zvekuti anoda kuti ndiwane mabhuku mumutauro wangu. Izvi zvinotowedzera kundiswededza pedyo naye.”
“Ndinoonga chaizvo kuti Jehovha anondikoshesa zvikuru zvekuti anoda kuti ndiwane mabhuku mumutauro wangu”
Kuchinja Kwezvinhu Mune Mamwe Mapazi
Kubva musi wa1 February 2014, hofisi yebazi reUnited States yakatanga kuona nezvendima uye ungano dzemuJamaica uye dzemuCayman Islands. Zvechokwadi izvi zvinoratidza kubatana kwevaparidzi vanopfuura mamiriyoni 1,2 vari pasi pebazi reUnited States! Izvi zvinosanganisira nyika 50 dzinoumba United States, zvitsuwa zveBahamas, Bermuda, British and U.S. Virgin Islands, Puerto Rico, neTurks and Caicos Islands.
Mapiyona Ari muJapan
Hama nehanzvadzi dzemuJapan dziri kuramba dzichishingaira chaizvo pakupayona, uye pasi rose panongova nenyika nhatu dzine mapiyona enguva dzose akawanda kupfuura emuJapan. Pakatanga gore rebasa ra2014, vaparidzi 2 646 vakava mapiyona enguva dzose, saka mapiyona acho ose pamwe chete ava 65 668. Muna March 2014, nhamba inopfuura hafu yevaparidzi vemo yakaita upiyona hwakasiyana-siyana.